Murti Dahsoon oo Macne Badan: November 2007
(Oob jac.. Dib u Jeeeeeso)
Dubbe:Waar yaadhaheen waa nimanka meesha haw hawda ka haya. Waar bal saddex hadal oo saddex nin kala yidhaahdeen u fiirsada. Xaaji Cabdi Waraabe wuxuu yidhi. “Dib u dhigga doorashooyinka Guurtidaa iska leh wuxuun baanu gelaynaana arrintaa marka uu xukuumadda waqtigu ka dhamaado.” Waxa kale oo yidhi mar uu Guurtida la hadlayay. “doorashooyin iyo wax wal oo kaleba inaga daaya hadal hayntooda oo xaaladda dagaal ee Sool iyo xuduudaha uun aan ka hadallo.” Yusfuf Tallabo wuxu yidhi. “xaalad dagaal ayaa lagu jiraa dimuquraadiyadii way soo koobantay oo xukun deg deg ah ayaanu wax ku xukumaynaa nin walowba is ilaali.” Ina Xaaji Dahirna mar uu Guurtida la hadlayay wuxuu yidhi. “Waxaanu u shaqaynaynaa sidii dawladdii hore ( ee Siyaad Barre)” Haddaba maxay idinla tahay. “hadhawbay odhan layma heesinoo laylama hadline..” waar intay goori goor tahay ma tashannaa? Waar miyaanay idiin muuqan halka laynagu wadaa? Miyaydaan arkayn in muddadii layskaba korodhsaday? Ahaaa!
Doolaal:Oo maxaad ka tashanaysaa ma ceeba baa la yidhi? Dagaal baa lagu jiraa looma baahna in wax kasta layska yidhaa.
Dubbe:Ma sidaasaad adna la qabtaa? Horta nin baa maalin dhowayd xikmad ii sheegay. Wuxuu i weydiiyay inaan weligay ciyaarsiiska ama layliga askarta galay ee Oob-Jac da loo yaqaan. Maya baan idhi. Wuxuu yidhi. “ Askarta marka la ciyaarsiinayo ninba ninka uu ka dheeryahay ee ciyaarta ka yaqaan ayaa safafka hore la joojiyaa. Dabadeed sarkaalka layliga ayaa ku dhawaaqa “horeeeeey soco. Kow laba kow laba Ooob jac oooob jac” sida loo socdo ayuumbuu yidhaa haddana “Dib u jeeeeso.” Dib baa loo jeestaa in allaa intii gaagaabnayd ee ciyaarta xumayd ayuumbaa safka hore noqota. Iminka dib u jeeeeso ayaa inagu dhacday dadkan inna hoggaaminayaa waa intii xagga dambe joogtay marka hore.” (dadka gaagaaban aflagaado ulama muraadin ee waa xaqiiqo ka jirta ciyaarsiiska askarta)
Waar ninku meel buu wax iga tusay. Bal dadkan inaga ina xukumaya eega dad yahow. Dib u jeeeeeeeeeso dambe inaynu u baahannay miyaynu isla diidannay?
Doolaal:waar waatan islaantii hadalka badnayd ee u kaadiya. Waar yaa inaga joojiya. Adeer garaabada ugu soo dhakhsada hayna dhaaftee.
Dubbe:Waar daa islaanta iyadaa ku dhaantee.
Dulmar: Hooyo ma nabad baa? Ma la roon yahay? Ma joogaa inankii Dubbe?
Doolaal:Ee mojidiisee halkaa joog ha soo dhaafine anagaa garaabada ku siinaynee. Sug sug.
Dulmar: Waar inankaagani faduulisanidaa? Naa yaadhaheen. Wallee qadhaadhkaygaanad waxba ka arage afka ilamaad soo gasheen. Naa maxaa laysku lug go’ayaa? Wallee inaad farta dhexda ka qaniini. Anigu maadigaan kula hadlayay inankaa Dubbe iyo raggaa kale ee meesha fadhiya ayaan bariidinayay eh. Waar aniga waxba haysu kay madoobayn oo wejiga jaqaaf hayga dhigin. Waar siddi siddidaada mooyee dhul u dhacaaga hubso waa inanka. Naa yaadhaheen dagayay islaameed.
Dubbe:Dulmaray waykane iska daa ninkan oo waa mid sidaasa eh. Maxaad maanta wadday ?
Dulmar: Mayee eeddo waaba laygu dilaa. Sankaasuun buu daf kaa odhanayaa sidii xabbad bariis ah. Wallaahi inaanu ku hindhisi.
Dubbe:Iska dhaaf eeddo kanoo maxaad wadday?
Dulmar: Eeddo maalin dhowayto
Ood Ina dhaan dabagaalle
In dhaliila ka sheegtay
Runtii baad ku dhawaaqdoo
Anna waan la dhacay
Waxse aad ka yar dhaaftay
Sidii weeye Dhegdheere
Inuu dhaayo la’aantii
Iyo meel dhacadiidka
Dhiig dadoo u hillaciyo
Uu u dheeryay dad lays
Midna kaama dhegeysanoo
Runtii waan dhibsaday
“UCID wayska dhallaaniyo
hadba dhaan iska raac”
iyada kaama dhegeysan
ee dhoobaad ku maliiqdiyo
dhiriqdaada ka daa
Ha ku dhammooqin xumaan
malaa way ku yar dhaaftee
haw dhowaanin halkaa.
Dubbe:Horta Dulmaray waa talo wanaagsan. Waanan qaatay. Qudhaydu wax kale ma sheegini wuxuun baan idhi maalinba dhan bay yara maraan oo wax si ula muuqdaan. Laakiin iskaba daayay ee aan dhawr su’aalood ku weydiiyo eh horta inaan suxufi noqday ma ogtay? Mase taqaannaa suxufiga?
Dulmar: Mayee eeddo ma aqaane. Laakiin masaajidkaa ninka reer........... tukiyo ee nagu qabsan ayaan subaxii ka maqlaa isaga oo leh “Suxufi Ibrahiim wa Muusaa..”
Dubbe:kkkkk. Istaaqfurallaa. Ee kaasi waa quraane ha dambaabine. Suxufigu waa kan joornaalada iyo telefishanka ka soo hadla ee dadka wax weydiiya.
Dulmar: Oo eeddo maxaa aniga elefashankaa aad sheegayso iyo joornaalada i geynaya? Maya maya. Anigaa suxufigaa iga daa eedo. Itaalba uma hayo inaan elifayshankaa aad sheegayso soo dhex galo eeddo.
Dubbe:Waa hagaage haddaba nimankii waaba la qabqabaynayaa intaan laynagu darin aan wax ku weydiiyee. Ma maqashay inuu Ina Rayaale yidhi warba uma hayo waxay xukuumadda iyo hay’addii Xuquuqda Adamaha u doodi jirtay ee Shuro-Net isku qabteen? Maxayse kula tahay ma runtiibaa?
Dulmar: Dee hooyo hadduu yidhaahdo war uma hayo anigu ma beensanayo. Hadduu xukuumadda is yidhaa ka war hel saw mashquuli maayo yaa u ogaanaya xaasaska Kulmiye waxay raggooda u kariyeen qadadii. Yaa u ogaanaya cidda guriga Axmed Siilaanyo gashay iyo cidda ka soo baxday. Yaa u ogaanaya cidda UDUB ah ee cid Kulmiye ah salaantay . yaa u ogaanaya xanta mafaariishta ka socota iyo waxa laga leeyahay. yaa u ogaanaya maqaaxiyaha waxa laga leeyahay. yaa u ogaanaya inta bagaasha ee ay bashaashlaydii keentay. Yaa u ogaanaya inta adhiya ee ninkii sucuudiga ahaa raray. Yaa u ogaanaya inta doonyood ee kalluuna ee la raray. Yaa u ogaanaya inta birood ee iskaraab ee la raray. Yaa u ogaanaya doonyaha yar yar ee aan rukhsadda haysan ee kalluumaysanaya ee ku cidhiidhyaya badda. Yaa u ogaanaya inta shidaal soo degtay. Yaa u ogaanaya inta cigaar dib loo dhoofinayo. Yaa u ogaanaya inta baloodh ee shacabka ka bannaan. Waar Madaxweynaha ha jeedin hawl buu haystaaye. Maxaa ka galay Tallaabo oo cidla ka bakhbakhle iyo dumar ay is haystaan oo urur leh. Maxaase lagu qabqabanayaa nimanka aad suxufiga ku sheegtay?
Dubbe:Dee anigaa su’aalaha ku weydiinayee adigu ha i weydiinin. Oo waa sidee suxufinimadii baabaynu isku haysannaa labadeenuye. Muxuu Rayaaleba ku soo gaadhi. Ee ma maqashay xeerka saxaafadda “caalamiga” ah waxa lagu sheegay ee la yidhi joornaalkii wax xukuumaddu diiddo qora ha la xidho oo qalabkana ha laga qaado ? ma se maqashay inuu yidhi ha xisaabiyaan waxa soo gala oo xukuumadda haw sheegaan?
Dulmar: Kee baa wax xisaabinaya? Hoogyeeey! Ma kan inuu Baarlamaanka xisaabiyo diiday. Ma kan inuu xisaab xidhkii miisaaniyadda inuu keeno diiday? Ma in hanti dhawr lagu sameeyo diiday? Ma lacagtii ummadda ee dekedda Berbera in miisaaniyadda lagu daro diiday? Ma kan in lacagta Total ka soo baxda in miisaaniyadda lagu daro diiday? Ma kan wax walba diiday ayaa leh nimankan masaakiinta ah ee siday ugu finjiriireen waraaq yar oo ay qorayaan indhuhu ku gudheen i soo xisaabiya. Waataad ku go’daa dheh. Allah Hunguri. Hunguriyow lagu eed. Oo ma isagaa la leh. Naayadhaaheen. Dhiman waaye muxuu wax walba arki. Adigu miyaad maqashay xeer “Caalamiga” ah ee uu masaakiinta dawarsata ku soo saaray ee dhawaan Wakiilada loo gudbinayo?
Dubbe:Ee miyaanan ku odhan anigaa suxufi ah oo wax ku weydiinaya. Wallee Dulmar baan loo taag helin. Aan ku weydiiyee muxuu ahaa xeerkaasi?
Dulmar: oo haddaad suxufi tahay maad su’aal aad leeday keensatid? Ma taydii uunbaad dib ii weydiinaysaa?
Dubbe:Ee bal haaye muxuu ahaa xeerkaasi?
Dulmar: horta xeer “caalami ah” ayuu soo rogayaa. Wuxuu odhanayaa waxa dad dalka ka dawarsadaa waa inay xisaabtooda wasaaradda Maaliyadda keenaan iyagoo raacaya habka xisaabaha ee caalamiga ah. Dadka wixii Somaliland u dhashay labada saacadood ee hore wixii soo gala xukuumadda ayay u keenayaan. Wixii Oromo iyo Ethiopian iyo Walla Weyn ahina waxay keenayaan nus wixii soo gala. Haddii kale daasada ay sitaan iyo kabaha xun xunba waa lagala wareegayaa. Hadday dacwad qabaan maxkamadda gobolka ayay tegeyaan. Hadday soo waayaan kollay cid baa kaxaysatay ee suuqa ha ka raadiyaan. Haddii ay waayaanna ShuroNetka cusub ee aanu samaynay haw tagaan iyana Tallaabo ha soo weydiiyaan waxa laga yeelayo intaanay wax ku dhawaaqin. Haddii kale Ina Shiil shaqadiisa wuu yaqaan...
Posted by Daljir at 9:07 AM 240 comments:
(Ina Dhaan Dabagaalle Ma Dhab baa Laga Mooday? )
Doolaal:Waar horta weftigii Laascaanood.....
Dubbe:Waar u kaadi u kaadi. Inaadeeerow dhawr kelmadood oo geeraar ah baan isku hagaajiyay ee intaanan kala illaabin iga dhegeysta.
Doolaal:Waar geeraarna garan mayside naga daa aanu kaa sheekaysannee.
Dubbe:Maxaad ku sheekaynaysaa ee aad haysaa? Waar na sug ninyow. Waar waxan nagala hadla dee.
Doolaal:Horta ma yar qayilnaa oo qadhaadku ma na gaadhaa? Anagoon salkaba dhigin baad leeday geeraar dhegeysta.
Dubbe:Waar sidaa wax u waddaan iga wallaan malaa dib loo qayilayne na dheeyso wixiiba kala illawnaye.
Dubbe:Horta dee nin gabya ma ihi laakiin markaan ka yaabay sida aydin maalin walba u sii kibraysaan ee dadka u dulmaysaan ee Booliskii inaga dhexeeyay ugu adeegsanaysaan ee maxkamadahan sidii Jajabanta kolba meel u kaxaysanaysaan ayaan afar isu geeyay. Wuxuu yidhi.
Dhulkaa ciil gilgishoo
Samirkaa ka dhammaadoo
Waxa dhooban dushiisa
Marbuu buuraha dheer
Dhinacaa u ridaa
Dadku dhiirri yaraa
Dhiig la’aa demenaa
Dhanna aan kaga oollin
Ee Rayaale dhagtaa
Dhacdaa uu ku hayo
Dheguu saw ma qarxaan
Ma dhaffoorro biray
Dhibtuu leeyahay quudhsi
Dulmigoo laga dhuunto
Oo laga dhiidhiyi waayo
Horaa loo dhadhanshee
Ma dhakhsay u illawday
Iyagoon xadka dhaafin
Uu Distoorku dhigaayo
May xaqood dhacsadaan
Raggii aan wax dhimaynin
Sida dhuuryada haadda
Oo dhalaal cad u muuqday
Markii uu dhufanaayay
Ee dhayal uu u xidhaayay
Ee uu jeelka dhigaayay
Dheeshii waa maqasheene
Illayn maaha dhurwaa iyo
Dalkeenay u dhasheenoo
Dhab bay soo halgameenoo
Faqashtii ka dhacsheene
Haddii aad u dhawaato
Halka uu dhitadiisa
Ku ilaasho dhashiisa
Dhawaaquu kugu yuuso
Dhegahuu ka galaayoo
Sahal looga dhaqaajine
Ma duqsaad dhanka hoose
Iyo dhulka aad marteen
Inagoon xadka dhaafin
Uu dhigaayo Distoorku
Maxaa loo dhicin waayee
Lagu dhaafay warkooda
Adhiguu ku dhisnaaye
In dadkeenu u dhoofsho
Dhulka suuqu ku yaallo
Sawkan dhaar ka maree
Carab uu dhadhamo
Iyo dhuuni baas la cuno
Dhaadka nooga xidhee
Baqkhti aan ku dhawnay
Uu Dustoorku dhigaayo
Maxaa loo dhihi waayay
Waa midaan dhacahayn
Ee iskood u dhisteen
Kuwa dhawra xuquuqda
Ee dhibbanaa u hadlayaaya
Dhabqiskuu ku abuuray
Ee dhankaa gurigiisa
Ee ninka dhoomaha weynle
Iyo dhuuso ka buuxu (Tallaabo)
Dhex socdee hor kacaayo
Qufulkay ku dhufteen
Dhayal maw furi weynay
Dhalaw maynu ka siiyo
Alla dhoy li’inaa
Dhan ka waalaninaa
Markuu dhaarta maraayay
“dhaqaalaan kobcin eegga
dhallintaan shaqo geyn
dadkuu wuu dhergayaa
Ma dhab baa laga mooday
Markauu dhoofka tegaayay
Uu dhulkaa marmaraayay
Ina dhaan dabagaalle
Irbad dhuub ma geshe
Muxuu soo dhicinaayay
Iyo doolarka dhoormay
Meelo soo dhiganaayay
Daaruu soo dhisanaayay
Dhoolluu soo tumanaayay
Dhanna wuu ka dalxiisay
Dhar buu soo gadanayaayay
Dhawaaquu na lahaa
dhuxul baan qodayaa
jibsam baan dhurayaa
malaayiinti is dhaaftay
qof walooba ka dhaanso”
Dhalanteed u aroorka
Kuwii diinta dhigaayay
Dhakhaatiir cilmi gaadhay
Intaasoo isku dhoon ah
Markuu dhoollo caddaynta
Soo dhawaada lahaa
Oo khilaafka dhammeeya
Axdiguu la dhigaayay
Dhegbaan lay jalaqsiinne
Sawnigii ku dhawaaqay
Ee dhaqankiisa tilmaamay.
UCID wayska dhallaanoo
Kolba dhaan iska raace
Kulmiyii dhumuc sheegtay
Ee dhaqdhaqaaqi (SNM) ka joogee
Miyaad dhuumatay doorkan
Ma dhoof baa qabateen
Dadku way dhanqalmeenoo
Sharci layskaba dhaafye
Xaggee baa ka dhacdeen
Maa ka soo dhicisaan
Posted by Daljir at 8:04 AM 1 comment:
Posted by Daljir at 8:02 AM 1 comment: